नेपालदृष्टि । नेपाली कांग्रेसका नेता रमेशजंग रायमाझीले डा. शेखर कोइारालाले गुटको नाममा मोरङ र सुनसरीमा पार्टीका सिनियर मान्छेलाई विस्थापित गरेको आरोप लगाएका छन् । रायमाझीले भने, “डा. शेखर कोइरालाले गुटको नाममा मोरङ र सुनसरीमा पार्टीका सिनियर मान्छेलाई विस्थापित गर्न खोजेका छन् । त्यो महाधिवेशनमा काम लागे पनि भोलि संसदीय, प्रदेश र स्थानीय तहमा त्यस्तो गुटले काम गर्दैन । जो सधैंभरि गाउँमा बस्छन्, फिल्डमा खटिन्छन्, जनताको सामाजिक काम गर्छन्, कांग्रेसका लागि लड्छन् । तिनलाई हराएर को नेता हुन सक्छ ?”
रायमाझीले थपे, “मोरङमा असली नेता अमृत अर्याल नै देखिनुभएको छ । उहाँले प्रदेश, क्षेत्रीय र केन्द्रीय प्रतिनिधिमा सर्वसम्मत गराएर आफ्नो नेतृत्व क्षमता देखाउनुभएको छ । आगामी निर्वाचनमा कांग्रेसलाई बलियो बनाउने विशाल छाती उदेखाउनुभएको छ । मलाई कसले मत हाल्छ, कसले हाल्दैन भन्ने गुटको राजनीति आधारमा काम गर्दा भोलि पार्टीको अवस्था के हुन्छ ? महाधिवेशनमा मत हाल्नु मात्र ठूलो कुरा होइन ।”
शेखर कोइरालाले गुटको राजनीति गर्दा नै संसदीय निर्वाचनमा पराजय भोग्नुपरेको आरोप उनले लगाए । महाधिवेशन प्रतिनिधि हारेको झोक झिक्नुभएको हो भन्ने पत्रकार धमलाको प्रश्नमा उनले थपे, “म पराजित हुनु ठूलो कुरा होइन । म संसदीय निर्वाचनमा पनि पराजित भएको हुँ । अहिले राष्ट्रिय सभा सदस्य छु ।
नेता हुने मान्छेले तपाईं यहाँ बस्नुस् भन्न सक्नुपर्छ । शेखर त एउटा गुट चलाएर हिँड्नुहुन्छ । हिजो संसदीय निर्वाचनमा शेखर पराजित हुनुभएको होइन ? उहाँ प्रचारमुखी हुनुुहुन्छ । मिडियामा भनेको कुराले मात्र पुग्दैन । नाराले मात्र पनि काम चल्दैन ।”
उनले कांग्रेसमा युवाको नाममा बार्गेनिङ मात्र भइरहेको आरोप पनि लगाए । उनले भने, “शेखर कोइराला ७२, ७३ वर्षको हुनुभयो । उहाँलाई युवा भन्ने हो भने मचाहिँ बालपुस्ताको हुँ त ? पुरानो बोत्तलमा राख्नेबित्तिकै रक्सी गंगाजल हुने वाला छैन । उहाँले आफ्नो क्षेत्रमा सर्वसम्मत गराउन सक्नुभएन । नेता त अमृत अर्याल हो । अनुहारले मात्र के गर्छ ? शेखर पार्टीको महत्त्वपूर्ण बैठक छाडेर हिँड्नुहुन्छ । अनि के हुन्छ ?”
युवा नेताहरुले कहिले कोसँग टाँसिने, कहिले कोसँग टाँसिने गरिरहेको उनले बताए । उनले भने, “युवा मित्रहरुले केन्द्रीय समितिमा गएर केके काम गर्नुभयो, मन्त्री भएर के काम गर्नुभयो ? प्रचार एउटा कुरा हो, काम अर्को कुरा हो।काठमाडौंजस्ते सहरको राजनीति होइन, तराई, पहाडबाट प्रतिनिधित्व गर्ने नेतालाई थाहा हुन्छ, जनताको काम ।”
आम निर्वाचनमा ६३ सिट जितेको कांग्रेसको सरकार बनाउन सक्ने देउवा कांग्रेसको सच्चा नेता भएको पनि दाबी गरे । उनले भने, “म आस्तिक हुँ । म कसैलाई भगवान् मान्दिनँ । हिजो किसुनजी, गढोशमानलाई पनि भगवान् मानिनँ । दुई सांसद निलम्बनमा परेपछि ६१ सिटमा खुम्चिएको कांग्रेसलाई सरकारमा पुर्याउनु शेरबहादुर देउवाको निर्णय क्षमता होइन ? १६५ सांसदको बहुमत पुगेको दिन हथौंडा हानेको हो होइन ?”
देउवालाई सभापति उठ्नुहुँदैन भन्नुभन्दा पहिले पार्टीको विधान संशोधन गर्नुपर्ने उनले बताए । उनले भने, “पहिले एक कार्यकाल मात्र सभापति हुने गरी विधानमा परिवर्तन गर्नुपर्यो । त्यसपछि गाउँदेखि केन्द्रसम्म कुनै पनि सभापति दोहोरिँदैन । कुनै झन्झट पनि हुँदैन ।”
(नेपाली रेडियो नेटवर्क (एनआरएन) को कार्यक्रम नेपाली बहसका लागि नेपाली कांग्रेसका नेता रमेशजंग रायमाझीसँग पत्रकार ऋषि धमलाले गरेको काराकानीमा आधारित)
“मेरा प्रतिवद्धता अवश्य पुरा गर्ने छु”-नागेश्वरप्रसाद सिंह
वडा अध्यक्षमा नै किन बालकृष्ण ढकाल ?